जुलुुसको नेतृत्व गर्दै पृथ्वीनारायण शाह ! - Medianp.com
जुलुुसको नेतृत्व गर्दै पृथ्वीनारायण शाह !
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: बिहिबार, पुष २८, २०७३०८:०३0	२८ पुस, गोरखा । पृथ्वीजयन्ती मनाउन गोरखा सदरमुकाममा स्थानीय भेला भइरहेका थिए । दौरा–सुरुवाल र श्रीपेच लगाएका ‘पृथ्वीनारायण शाह’ त्यहीँ आइपुगे । उनको हातमा तरबार र ढाल थियो । कम्मरमा पटुकी बाँधेर खुकुरी भिरेका । र्‍यालीका सहभागी उनैलाई हेर्न थाले ।
युवा पुस्ताले शाहलाई नभुलून् भनेर आफू शाहको भेषमा आएको उनले बताए । पृथ्वीनारायणको योगदानलाई ओझेलमा पार्ने गरी प्रचार हुन थालेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे । बजार परिक्रमा गरेर -यालीका सहभागीले पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा माल्यार्पण गरेका थिए । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
स्वस्थानी ब्रत आजदेखि सुरुदुर्गमका निशुल्क औषधी बाटो मै चट
सरकारको निर्णयपछि एमालेको यस्तो शंका